Chineke adịghị na-akpọ Allah
Allah bụghị Chineke nke Bible na-ekpughe na-na Muslim n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ.
Ha ekwupụtara mgbe ahụ ka Allah bụ naanị Chineke na nke na-adịghị na Bible Chineke. Ma na dịkọrọ ndụ Swedish nsụgharị na-ekpu mgbe Allah sụgharịta ka "Chineke".
Ajụjụ a, m na-enyekwa a obere azịza nke njụ-ajụjụ page .
Ị sị na a video na Allah na Christian chi atọ n'ime otu bụ otu Chineke. Olee otú ọ na-abụ mgbe ma Islam na Christianity na-dabere na Judaism na niile ndị Juu ndị amụma a na Muslim Koran?
The Bible na-akpọ Chineke Allah. Aha ya YHWH - Jehova. Nke a bụ aha na-Jesus.
Ndị Rom 10: 9. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Jizọs bụ Onyenwe anyị na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta.
Ẹyenam Allah na YHWH enwe otu Chineke nke ga-n'ezie Jizọs kpọrọ Allah.
Muslim n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ
Allah bụghị Chineke nke Bible na-ekpughe na-na Muslim n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ:
"E nweghị ndị ọzọ Chineke karịa Allah na Muhammad bụ onye ozi nke Allah ."
Na Arabic ọ bụ "Chineke" na "Allah". Ọ bụ otú dị iche iche okwu, nke na-ekpughe na Chineke apụtaghị na Chineke. Ha ekwupụtara mgbe ahụ ka Allah bụ naanị Chineke na nke na-adịghị na Bible Chineke. Ma na dịkọrọ ndụ Swedish nsụgharị na-ekpu mgbe Allah sụgharịta ka "Chineke". Eleghị anya n'ihi na anyị na West ga-mgbagwoju anya n'ime echiche na ikpe nke Chineke Ndị Kraịst.
Ma "Allah" bụ onye kwesịrị ekwesị aha ahụ pụtara "oké chi" ma okwu ekwesịghị ịbụ ghọtahiere ka pụtara na Bible Chineke. E nwere 300 arụsị na Mecca. N'ime ndị a, Allah kasị ukwuu chi nke Muhammad ẹmende si na ihe mere ya na otu Chineke.
Chineke nwere nwa nwoke
Chineke nke Bible nwere nwa, nke ọ na-ekwu ọtụtụ ugboro ma Old Testament na New Testament.
The ochie Testament
Okwu 30: 4 Ònye rịgooro n'eluigwe ma bịa ala ọzọ? Ònye chịkọtaworo ifufe ya aka? Ònye agbụ miri a uwe? Ònye ike niile nke ụwa ókè? Gịnị bụ aha ya, na ihe bụ nwa-ya - ị maara na N'ezie?
Ke 11: 1st Mgbe Israel bụ a nwa m na ya hụrụ ya n'anya, na n'Ijipt m si kpọpụta nwa m.
2 Samuel 7: 14.Jag ga-nna-ya, na ọ ga-nwa m. Ọ bụrụ na ome ajo omume, M ga-dua ya nkpa-n'aka, nke mere na ndị mmadụ na-emekarị, na na n'ọnyá nke umu madu.
Psalm 2: 7 m ga na-ekwusa Jehova mkpebi. O wee sị m: "Ị bụ Ọkpara m, nke a ụbọchị nwere m amuwo gi."
Psalms 89: 27 Ọ ga-etiku m, 'Ị bụ Nna m, Chineke m na nzọpụta m! "
Mark 1: 1. Nke a bụ mmalite nke Jizọs Kraịst, bụ Ọkpara Chineke, ndị Gospel.
Luke 1:35. Mgbe mmụọ ozi zara, si ya, Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị, na Onye Kasị Elu ga-ekpuchikwa gị: n'ihi ya, nakwa onye Holy nke a ga-amụ nke na ị na-akpọ Ọkpara nke Chineke.
Ndị Efesọs 4:13. ruo mgbe anyị niile ga-adị n'otu nke okwukwe na nke ihe ọmụma banyere Ọkpara Chineke, ruo a bụ nwoke zuru okè, na ogo nke ntozu okè na nke ozuzu nke Kraịst.
Hibru 4:14. Ebe anyị nwere nnukwu onyeisi nchụàjà, Onye gabigaworo eluigwe nile, bú Jisus Ọkpara Chineke, ka ayi jidesie nkwupụta anyị.
Jizọs n'onwe ya na-ekwu na ọ bụ ya bụ nwa nke Chineke
John 3:18. Onye ọ bụla nke kwere na ya na-adịghị ikpe, ma onye ọ bụla na-ekweghị ila ikpe ama n'ihi na ọ kweghi Chineke Ọkpara ọ mụrụ naanị.
John 5:25. N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, E nwere oge, na ọ bụ ugbua ebe a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Chineke; na ndị na-anụ ga-adị ndụ.
John 9:35. Jizọs nụrụ na ha achụpụwo ya, na mgbe ọ hụrụ ya, ọ sịrị ya: Do i kwere na Ọkpara Chineke?
John 10:36. ka ị na-ekwu nke ya onye Nnam doro nsọ, na zitere n'ime ụwa: Ị na-ekwulu Chineke, n'ihi na m sịrị, Abụ m Ọkpara Chineke.
Chineke (Nna) na-ekwu na o nwere nwa nwoke
Matiu 3:17. Ma, le, olu sitere n'elu-igwe, si, Nke a bụ Ọkpara ọ hụrụ n'anya. Na ya na m na-enwe ezi uche.
Matiu 17: 5 Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, le, ekpuchi ndị nke a luminous ígwé ojii, ma, le, a olu si n'ígwé ojii ahụ, sị, Nke a bụ Ọkpara ọ hụrụ n'anya, onye m mma uche. Geenụ ya ntị.
Kaa 1:11. Otu olu wee si n'eluigwe: Ị bụ ndị m hụrụ Ọkpara ya, onye m mma.
Mak 9: 7 Na a ígwé ojii bịara na kpuchiri ha, na site na ígwé ojii wee olu na kwuru, sị: Nke a bụ Ọkpara ọ hụrụ n'anya. Nụrụ Ya!
Allah nwere dịghị nwa
Ma na Koran ọ na-ekwu n'ụzọ doro anya na Allah nwere dịghị nwa nwoke.
Allah emebeghị ka onwe Ya a nwa, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ chi n'akuku ya; na ikpe ọ bụla ga-chi anakwerewo ihe o kere, ụfọdụ na-na-na-agbalị iji nweta ọchịchị ndị ọzọ. (Koran 23:29)
"Ma ndị Juu na-ekwu," Ezra bụ nwa Chineke, "na Kraịst:" Kraịst bụ Ọkpara nke Chineke. "A na-ekwu na ọnụ ha, ha na-eṅomi sägelserna si ndị disbelieved n'ihu. Chineke ọnụ na ha, otú ha na-deluded n'ebe Eziokwu!" (Koran 9:30)
John 3:16. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bula nke kwere na ya ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi.
2 Cor 5:19. N'ihi na Chineke na Kraịst mma n'ụwa ka ya onwe ya, ma ọ bụghị ịgụ ha mmehie ha, na o mere ka anyị na okwu Chineke dị ná mma.
Kor'an Allah eziteghị a nwa ụwa n'ihi na ọ dịghị nwa nwoke.
Ya mere, e nweghị nzọpụta na Allah dị ka e nwere nke YHWH - Yahweh - n'ihi na e nweghị reconciler na Koran.
Ọzọkwa, Koran ọzọ Jesus karịa ihe Bible kọwara na-agba akaebe na. Ndị a bụ kpamkpam abụọ dị iche iche ndị mmadụ. "Jesus" nke Koran na-aga kpamkpam megide ihe Baịbụl kwuru banyere Jizọs.
"Na (cheta) mgbe Jesus, nwa Meri, kwuru, sị:" Oh Children of Israel! M ozi Chineke unu, iji gosi na Torah (nke bịara) tupu m na-enye gị ozi obi ụtọ nke a ozi na-abịa mgbe m, onye aha ga-Ahmad. "Ma mgbe O (Mohammad Ahmed) wee ha na-doo anya-àmà, ha kwuru, sị: "Nke a bụ mere anwansi" (Quran 61: 6)
Ọ ga-adị otu Jizọs, nke bụ "Jesus" nke Koran kpamkpam megide onwe-ya. Ọ bụghị nanị na-emegide onwe ya, ma ọ na-agọnarị ya onwe ya.
Jizọs bụ Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ
Up 1: 8. M Alfa na Omega, mmalite na ọgwụgwụ, ka Jehova kwuru, onye bụ na onye bụ na ọ bụ na-abịa, Onye Pụrụ Ime.
Dị ka Bible abụghị Muhammad onye-ozi nke Chineke, ma ọ bụ ozi, n'ihi na emewo ka Jizọs kwuru na ọ bụ mmalite na ọgwụgwụ. Alpha na Omega bụ mbụ na ikpeazụ akwụkwọ ozi nke mkpụrụ okwu Grik. Na ndị ọzọ okwu, Jizọs bụ Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute tupu Jizọs na ọ dịghị onye ga-abịa mgbe Jesus. Muhammad wee ọtụtụ narị afọ mgbe Jesus. N'ihi ya, ọ na-egosi na Muhammad bụ onye amụma ụgha.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 02:52